Ukuxilongwa ngokweqile kwe-dyslexia? (ingxenye 1) - Ukuqeqeshwa Okuqondayo
Ulapha: Ikhaya » Ochwepheshe » Izihloko » I-DSA » Ukuxilongwa ngokweqile kwe-dyslexia? (ingxenye 1)
I-agumenti dyslexia, ngokufanelekile noma ngokungeyikho, kuyaxoxwa ngokuqhubekayo, ikakhulukazi kusukela ekuqaleni kokusebenza komthetho odumile 170 ka-2010. njengoba kubikwe ezinye izindatshana ezingezona ezesayensi noma ze-epidemiological (lezi ezinye: isihloko 1, isihloko 2, isihloko 3) okuthi ngeshwa ngemuva kweminyaka eminingana ibuye ibe nosizi oluningi enetheni.
Kepha ingabe kunjalo ngempela?
Yize kusenokwenzeka ukuthi ukuhlolwa okuningi kokuxilongwa kwenziwa kakhulu (bona lapha ukuthi kuyini ukuhlolwa kokusolwa kwe-DSA), lo mbono awenele ukusho ukuthi kukhona ukuxilongwa ngokweqile kwezinkinga ezithile zokufunda. Kunganconywa ukuthi kube nezinombolo ezisivumela ukuthi sisho ukuthi inani lamacala atholakala ukuthi ahambisana yini nokulindelwe (okuhlukahlukene kakhulu kepha imvamisa iba phakathi kuka-2,5 no-3,5% wabantu), ngaleyo ndlela kuqinisekiswe noma kungavunyelwa umbono osakazeka kabanzi wokuthi lesi senzakalo silinganiswe ngokweqile.
Ngale ndlela, imininingwane eqoqwe eminyakeni embalwa edlule eFriuli Venezia Giulia ingasiza I-Barbiero kanye nabahlanganyeli; kulolu cwaningo ababhali baphinde bathola amakilasi angama-94 amabanga esikole sesine, okubandakanya izingane ezingama-1357 ekuhlolweni kokuxilongwa. Ngokuhambisana nokulindelekile, u-3,1 - 3,2% wesampula wezingane wakhiwa ama-dyslexics (ngokususelwa kwinqubo esetshenzisiwe) kepha "ngokumangazayo" izingxenye ezimbili kwezintathu zazo azikaze zikuthole ukutholwa ngaphambili yize zazinodaka ngempela .
Okungenani kulokhu idatha ingahle ibonakale ngathi sikude nokuxilongwa ngokweqile kwe-ASD, impela, kaningi izingane ezingazuza ekuhlolweni okunembile azibonwa kusenesikhathi ngokwanele.
ukuxilongwa kwe-dyslexia, ukuxilongwa kwe-dsa, dyslexia, ukukhubazeka kokufunda okuthile, DSA, ukuxilongwa ngokweqile, ukuxilongwa okuningi kakhulu
Ukuxilongwa ngokweqile kwe-dyslexia? (ingxenye 1)2016-06-132020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2016/06/dislessia-bambino-300x300.jpg200px200px
Odokotela abane-DyslexicImibhalo, i-DSA, i-DSA
Ukwelapha ngethebhulethi nenkulumo. Ukubuka konke kwezinhlelo zokusebenza, izinsiza, amamodeliI-DSA, Ubuchwepheshe obusha